I-CNC yeziko lomatshini wokusebenzela
Umgca Jera ilifa ubuchwepheshe CNC izinto processing, ukuba ulawulo ezenzekelayo izixhobo machining (ezifana uqheliso, izixhobo ekruqulayo, lathes) kunye 3D abashicileli esebenzisa ikhompyutha. Inkqubo yomatshini isiqwenga semathiriyeli (isinyithi, iplastiki, ukhuni, iseramikhi, okanye ukudityaniswa) ukuhlangabezana nokubalulwa ngokulandela imiyalelo ebhalwe ngekhowudi kwaye ngaphandle kwesixhobo esisebenzayo. Senza i-R & D kwaye siphuhlisa iimveliso ezinxulumene nemveliso yile teknoloji.
Kwindawo yokusebenza yomatshini we-CNC sivelisa icandelo lehardware kwiimveliso zethu eziqhelekileyo, ezinje nge-anchor clamp, ukumiswa kwamasango.
Izinto ekrwada esasizisebenzisa yintsimbi enje ngeAluminiyam, iCopper, iBron njlnjl.Impahla eluhlaza esiyenzayo yokuhlola engenayo kulandela i-ISO 9001 esemgangathweni: 2015, kunye neemfuno zethu zangaphakathi.
I-CNC luphuculo olukhulu ngaphezulu koomatshini abangasebenzisi zekhompyuter ukuba i-mush ilawulwe ngesandla.
Ngale teknoloji, i-jera fiber iyakwazi ukwenza iimveliso ezintsha okanye ukwenza ngokwezifiso uluhlu lwemveliso yangoku ukuze ikhuphisane ngakumbi, kwaye ikwazi ukubonelela abathengi bethu ngokubonelela okufanelekileyo kunye nomgangatho ophezulu.